Ukubuka okuhle kakhulu kwe-Taghazout - I-Airbnb
Ukubuka okuhle kakhulu kwe-Taghazout
Sous massa, i-Morocco
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Michel & Dominique
U-Michel & Dominique Ungumbungazi ovelele
Yifulethi kuphela eline-balcony engu-17 m2 eyakhiwe ngaphezu komzila ohamba ngasolwandle, enikeza ukubukeka okuyingqayizivele kwamagagasi, idolobhana, abadobi, abatshuzi. Ibithokomele kakhulu, ihlotshisiwe futhi igcinwe ngokucophelela ekuhlaleni okusezingeni eliphezulu ngaphezu kolwandle, eduze namathilomu amaningi nezindawo zokudlela ebhishi nezinyathelo ezingu-2 ukusuka ezikoleni zokutshuza, enkabeni yaleli dolobha elinobungane lase-Berber elixuba abadobi, abathengisi, abagibeli bamagagasi abavela emhlabeni wonke... nezinye izivakashi.
Sathandana naleli dolobha lokudoba eliyingqayizivele, futhi leli fulethi 'lamanzi' elikuvumela ukuba ubhukude noma udlale emagagasini phambi kwebhalikhoni enkulu evulekile olwandle.
Siyilungiselele ukuze futhi kube kuhle ekuhlaleni komndeni (kulungele izinsana ezinombhede 'wesambulela' nesihlalo sezingane), futhi sivumele ukusebenza kumabonakude (i-wifi yokusebenza ephezulu engu-100 mb/s).
Ukuhlala e-Paris, ngeshwa akuvamile ukuba khona futhi siyiqasha iminyaka engaphezu kwengu-12, sisizwe ngaso leso sikhathi ngu-Guangou, umnakekeli nomngane wethu onobungane. Wasisiza ukuba senze leli fulethi libe yindawo ekhethekile kakhulu eshiya izivakashi zethu zikhumbuleke ngezinga eliphezulu (...bheka konke okushiwo abanye).
4.87 · 109 okushiwo abanye
Le ndlu isogwini lolwandle, enhliziyweni yedolobhana laseBerber lokudoba, isavikelekile ngokuyisimangaliso ekuvakasheni kwabantu abaningi. Awekho neze amanye eningizimu yeMorocco, ngoba ugu olunamabhishi amaningi amahle alusetshenziswa kangako. Indawo yokungcebeleka yesikhathi esizayo 'ephezulu-kwe-range' esakhiwayo ngaphambi kokuba idolobhana lisebenzise leli thuba (inkundla yegalofu enhle isiphelile) kodwa ngeke ithathele indawo ubuqiniso nomkhathi okwenza ubuhle obukhethekile baleli dolobhana elinobungane nelifudumele. , ngaphandle inkinga yezokuphepha noma ukuhlukunyezwa izivakashi (akusiyo Marrakech!).
Ukuba khona kwasebusika kwabatshuzi abasha abavela emhlabeni wonke kukhuthaze ukushintshana nabantu baseBerber kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zokudlela eziningi ezincane nezitolo zegrosa ezithengisa kancane kwakho konke. Isimo sezulu sihlukile, singcono kakhulu kunesase-Agadir eqhele ngamakhilomitha angu-18 ngoba inenkungu encane.
Ifulethi lisendaweni ekahle ogwini lolwandle, lithule (ngaphandle kwamagagasi!) Futhi eduze nezindawo zokudlela ezinhle nezindawo zokudlela eziningana. Abatshuzi bajabulela ngempela ukukwazi ukuntweza phambi kovulandi (bona izithombe). Kulabo abenelisa ukugeza, ulwandle olunesihlabathi olwehlela kancane luphephe kakhulu futhi aluvakashelwa kakhulu ngaphandle kukaJulayi-Agasti.
Ibungazwe ngu-Michel & Dominique
U-Abdou, umnakekeli walesi sakhiwo esincane, uzokwamukela futhi usezandleni zakho kukho konke ukuhlala kwakho. Ukuze uthole ukwaziswa of course, kodwa futhi uma ufisa ukukusiza (ukuthenga, ukuhlanza, ukupheka ... Ngisho nokuqalwa surfing): ukubona ngqo naye.
U-Abdou, umnakekeli walesi sakhiwo esincane, uzokwamukela futhi usezandleni zakho kukho konke ukuhlala kwakho. Ukuze uthole ukwaziswa of course, kodwa futhi uma ufisa ukukusiza (uk…
UMichel & Dominique Ungumbungazi ovelele